"Ary raha mifady hanina hianareo, aza mety ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, izay malahelo tarehy; fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan’ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa hianao kosa, raha mifady hanina, dia hosory ny lohanao, ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan’ny olona fa mifady, fa ho hitan’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. Aza mihary harena ho anareo et? an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao. Ny maso no jiron’ny tena; koa amin’izany, raha tsara ny masonao, dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao, dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra; koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny halehiben’izany fahamaizinana izany!" Matio 6:16-23
Zanaky ny mazava. Mifampitohy amin’ny foto-kevitra etsy aloha ny momba ity fifadian-kanina ity: tsy laza no tadiavina eto (16) fa fankasitrahan’ny Ray (17). Heverin’ny maro ho zavatra mendrika izany mivavaka izany ka na ny jentilisa (7) sy ny mpihatsaravelatsihy koa aza (16a) dia mba mivavaka. Rehefa itoriana ny Filazantsara ireo tsy mbola manana ny Tompo dia matetika re ny hoe “Izahay koa anie mba mpivavaka tahaka anareo e!”. Marobe ny fivavahana eran-tany fa vitsy ny mahita ny làlana dia i Kristy irery ihany izany (Jaona 14:6). Marobe koa eto Madagasikara ny mpiangona Alahady fa mba maro toy izany koa ve ny manao ny sitrapon’Andramanitra? Nahoana ary ny firenentsika no dia anjakan’ny ratsy maro toy izao (ao anatin’izany ny habetsaky ny halatra: 19b)? Fa nankaiza ny kristianina fanasin’ny tany? Ny mpino no maso mahita ny zavatra ara-panahy (I Korintianina 2:9-10) ka raha tsy miasa tsara izany maso izany dia ho maizina ny firenena manontolo (23). Ho an’ny tsirairay koa dia ny finiavana hitady marina ny sitrapon’Andriamanitra no mitondra fahazavana eo amin’ny fiainany.
Tsy azo antoka izao fiainana izao. Be ny zava-tsoa sy harena omen’Andriamanitra hankafizin’ny olombelona eto an-tany na mpino izy na tsy mpino. Tsy azo anankinana ny fo anefa izy ireny (21) fa mety ho simba, na hisy hangalatra (19). Ny harena any an-danitra no tena azo antoka ka tokony hatao lohalaharana ny fikatsahana azy (20).
Fanontaniana: Aiza tokoa re no ametrahako ny foko e?